Academy Wailu Kyaw and Levi Sap Nei Thang - We Love Myanmar
Posted on August 5, 2017 August 30, 2017 by We Love Myanmar
ပရဟိတ မောင်နှမနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ဝေဋုကျော်နှင့် I Love Myanmar မှ လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းတို့ တွေ့ဆုံ
ပရဟိတ မောင်နှမနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ဝဋုကျော် နှင့် လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းတို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံကြရာ အလှုခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံများကို အပြန်အလှန် ဝေမျှကြပါတယ်။ ကိုဝေဋုကျော်ရဲ့အမြင်မှာ ချင်းမလေးသည် ဗမာများစွာကို အကူအညီများ ပေးခဲ့ပြီး၊ ဗမာဖြစ်တဲ့ ကိုဝေဋုကျော်မှ ချင်းလူမျိုးများကို သွားေ၇ာက်ကူညီခဲ့တာ၊ မရည်ရွယ်ပါဘဲ မေတ္တာတုန့်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းသည် နာဂစ်ဒေသရှိ ဗမာ နှင့် ကရင်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် တာလီငလျင်ဒေသနှင့် ကချင်ပြည်နယ် စစ်ရှောင်ကလေးများအတွက် စာသင်ကျောင်းဆောက်ပေးခြင်း စသဖြင့် ဖြစ်ပျက်နေစဉ် ကိုယ်တိုင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကလေးမြို့ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ရေဘေးတွင်မူ ငွေကြေးအားဖြင့် ကူညီခဲ့ပါသော်လည်း အသက်အရွယ်အရသော်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရေဘေးဖြစ်နေစဉ် ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်တွင် အကယ်ဒမီ ဝေဋုကျော်သည် တခြားဒေသများကို ကူညီရင်း ကလေးမြို့နှင့် ချင်းပြည်နယ်သို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ကာ အကူအညီများပေးခဲ့ပါသည်။ အကယ်ဒမီဝေလုကျော်သည် ချင်းပြည်နယ်၏ အသည်းစွဲဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂါတ်တွင် ပရဟိတ မောင်နှမနှစ်ဦး လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမယ့်လုပ်ငန်းများ၊ ဒုက္ခရောက်နေသူများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ လှပသော တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မိတ်ဆွေများအား ၀မ်းမြောက်စွာ ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။
#Myanmar #ILoveMyanmar #WeLoveMyanmar #LeviThang
606 thoughts on “Academy Wailu Kyaw and Levi Sap Nei Thang”
Salai San Lynn says:
Aung Thurein says:
ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ….။ ဘုရားရှင်တို့သည်…ကျွန်တို့၏ လုပ်များ၌ တည်သည်။
Min Kan Si says:
John Ki Manai says:
ThanDar ShweYi says:
Thuu Wint Wint Thu hotel yangon
Thuu Wint Wint Thu says:
ကြည်နူး အားရ မိပါသည် ။
ကျန်းမာ ကြပါစေ ။
ပန်းအော့ ဆရာလေး says:
Ma Mar Oo says:
ဆလိုင်းး စွာစော်ကဲ says:
ကြိုဆို ပါ၏ says:
​လေးစားပါတယ်​ သာ၍ ဘုရားအသုံးပြုပါ​စေ ချစ်​မမ
NyiNyi OhnMar says:
Onmar Kyu says:
မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်နေတာလား အစ်မနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောဖူးချင်လိုက်တာ
ဟုတ်ကဲ့ ရောက်နေပါတယ် .. တွေ့ချင်ပါတယ်
Paing Phyo Wai says:
ဒါမျိုး Like ​ပေးရတာ အရသာရှိတယ်​
ဘန် နီ ဖြိုး says:
okကျန်မာပါစေ ဝေ မ
We are very proud of your humanitarian jobs.
အဝေးရောက် ချစ်သူ says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါမယ့်…. အမလဲ သာမန်လူသားပါဘဲ
ဟုတ်ပါ၏ သို့သော်သူများတွေထက် သာလွန်သော စိတ်ထားမွန်မြတ်သူပေါ့
Nyi Nyinyi says:
Siansian Pa says:
I Respected both of you
Daracular Lay says:
Cite Ticirh says:
Hlawn Te says:
Nan pahnih in uar nan um tuk aw Bawipa in lo thlawsuah sin2 hram seh law
ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့  မှာလဲ
တက် လူ says:
Aung N Aung says:
Eai Mon Dra says:
ဇလပ် နီမောင် says:
Thawzin Hilal says:
We are in ygn. Are you here too?
Ko Than Myint says:
Zawzaw Kukuu says:
အကိုကြီး နှင့် အမကြီး
ဆထက်တိုး ၍ ပရဟိတ လုပ်နိုင်ကြပါစေ
နော်တို့ လိုက်လာပါမည် ခင်ဗျာ
Mai Helen says:
Myomin Win says:
David T Nai says:
Like ​ပေးရတာ အရသာရှိတယ်​,, ကောင်းတယ်.
LNDစွမ်းအားရှင်အဖွဲ့အကုန်ပေါင်းတောင် ကိုကြီးကျော်ကို မမီးဘူး စိတ်ဓာတ် အရည်အချင်း
ကေတု မတီ says:
ဦးအောင်မောင်း သား အငယ်ဆုံး says:
ကြံ့ဖွတ်ဆို ပိုဆိုးသေး တယ်ဟေ့
Paing Shin says:
ဖြူဖြူဝင်း အောင်လံ says:
ကိုမိုး ကို လင်း says:
Prasert Tantikkaveera says:
I am very happy with the trip to takeatv. Program,
I recommend the tour of Myanmar.
Anyway, let me give youtube my list.
နန္ဒာ လှိုင် says:
Ko Jain says:
အဇ္ဈတ္တ ဗဟိဒ္ဓ says:
ThanWin Naing says:
ယ​နေ့မှစ၍ ဤ​မောင်​နှမ ၂​ယောက်​​ပေါ်တွင်​ဘုရားရှင်​​ကောင်းချီး​ပေးပါ​စေ
Soe Moe Myint says:
ချင်းပြည်​မှာ ချယ်​ရီမရှင်​ထာ ရှင်​​အောင်​စိုက်​ခဲ့တဲ့ အစ်​မ
U Aye Han says:
Thawn Kham says:
နှစ်ယော်စလုံး လူသားအကျိုး ပြုရင်း
ဘုရားအမှုပြုနေတာပါ Amen.
ညီမ လေး says:
Khin Kay Mon says:
Nilar Myathwe says:
Htu Lum says:
David Nawlpi says:
လရိပ် ချို says:
En No says:
Lwan Pan Myant says:
Pwint Phyu Lay says:
MeiNai Sutesi says:
Congrats Sapte’ !
Menai Daw Sutesi says:
Phyo Lin Aung says:
မမပုသိမ် သူ says:
Aprilkhinlay Lay says:
Nan Seng Lunn says:
ကို စိုင်း says:
Hla Khin says:
Ba Ba Htoo says:
နှစ်သား လှသူနှစ် ဦး
ထာဝရ ရွှေလက်များ ခိုင်ခိုင်တွဲ နို င်
ထာဝရ တွဲနို င်ကြပါစေ ။
San San Wai says:
San San YI says:
သတင်းစာထဲမှာလစဉ်​ သမီး​လေးဧမာ​နွေလကြာအိုင်​လင်း အတွတ်​ဆု​တောင်း​ပေး​နေတဲ့အမ ကိုအခုမှပဲမြင်​ဖူး​တော့တယ်​
Linlinlatlat Lay says:
နေမင်း လမင်သာ says:
Myakan Thar says:
Amily Lily says:
U Wai Gyi says:
ကာရံအလွမ်း အချစ်သက်သေ says:
Tnm Tum says:
Thae Po Lay says:
Wan Too says:
အနုပညာ ထဲ မှာ အလေးစားဆုးံ မင်းသားကတော့ ကိုဝေပါပဲဗျာ
သစ္စာ ရဲရဲနီ says:
Aung Thwin says:
Dawmyint Dawmyint says:
ရန်ငြိမ်း မင်း says:
အဖြူရောင် လေး says:
လွမ်းပိုင် လွမ်းပိုင် says:
လင်လင် လင်လင် says:
NayMin NayMin says:
မေသီရိချို မေသီရိချို says:
Thazin Pan says:
ဂုဏ်​ယူပါတယ်​ရှင့်​:-) 🙂 🙂
သက် ဝေ says:
ခင်မြတ် လေးဖြူ says:
အား…လေးထားရဆုံး အလုပ်ကို လုပ်တဲ့ အစ်ကိုနဲ့ အစ်မတို့နှစ်ဦး အရာရာတိုင်း အောင်မြင်နိုင်ပါစေ သည့်ထက်မက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတရ်
Min Thar Lay says:
့မကြေး မှုံ says:
Akyin Nar Myat Noe says:
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ​လေးစားလျှက်​ပါ
Shwe Yoe says:
Akp TA Mkn says:
Eio Yan says:
ချိူ သဲ says:
Soe Min Htike says:
Hau Bong says:
သံယောဇဉ် ကိုကို says:
Golden Pot says:
Daw Nyo Mi says:
Zinwint Naing says:
Chanlay Chanlay says:
Phyo MimOo says:
Garuna Yaung Chi says:
Maw Maw Sein says:
Kaung Htat Paing says:
Htet Myat Lwin says:
သန်း ထိုက် says:
နွေး နွေး says:
ချောင်းဝ သား says:
Ngun Nei Par says:
လင်းလက် လင်းလက် says:
Min Chitthu says:
ပိုင်သူနမ်း ပိုင်သူနမ်း says:
အစ်ကို နဲ့ အစ်မ တို့ကိုလေးစားတယ် ဂုဏ်ယူတယ် အစ်ကိုတို့အစ်မ တိုနဲ့အတူ တခြားပရဟိတ အဖွဲ့များ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပြီ လူမူကွန်ယက်ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ။ သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ
Aye Aye Thin says:
I pray for you living long life with healthily, joyfully and peacefully and can make donations more and more in your future.
နွေဦး ကံ့ကော် says:
ချစ် ငယ် says:
အကယ်ဒမီဒေါက်တာ ဝေဠုကျော်
ကောင်း ကင် says:
ကိုမြင့် ဦး says:
ဠ နဲ့ ဋ (လကြီး နဲ့ တ ‘ တလင်းဂျိတ်​) ကို ​သေချာသိ​အောင်​ သူငယ်​တန်း စာပြန်​သင်​ ခိုင်းရမှာလားး
ခင်မောင် ဦး says:
မြေ ကြီး says:
အများအကျိုးတွက် ဆောင်ရွက်နေတာ လေးစားမိပါတယ်
အမ Levi Sap Nei Yhang
စော သ စ္စာ says:
ချစ်သဲကို ချစ်သဲကို says:
Nilar Soe says:
Zuu Zuu Thar says:
ကိုလူချော ရမ says:
ထန်း ပိုင် says:
Daw Lay Swe says:
အရှင်ပညာနန္ဒ ဧရာဝတီ says:
ဦးနာ ယက says:
ဆရာ ချော says:
တုန် တုန် says:
UTun Tun says:
အထီးကျန် အစိမ်းရောင်စစ်သား says:
မေ သဉ္ဇာ ဦး says:
Tun San says:
Koko Htwe says:
Ko Too Ko Too says:
လွှမ်းမိုး လွှမ်းမိုး says:
ကိုဝေ အရမ်းလေးစားပါတယ် နိုင်ငံမှာအကိုအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်
အိမ် မက်ချို says:
Ko Ko Sai says:
Ukyaw Shein says:
U Khin Mg says:
Moe Sit says:
တိမ် လွာ says:
အကိုနဲ့အမကို အခုလို လူဒါန်းပေးကူညီပေးတာကျေးဇူ့ တင်ပါတယ်
Micheal Viel says:
ကိုကြီးနှင့်မကြီးဒီထက်မက ပရဟိတ လုပ်ငန်းဆေင်ရွက်နိုင်ပါစေ
ပန်းခင်းသော လမ်း says:
Myomin Myaing says:
Myo Myaing says:
Ah Tun says:
ဘုန်းပြည့် စံ says:
အကိုဝေဋုကျော် နေ့ရက်တိုက်မှာ ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
Nyan Myint Oo says:
Ye Zaw Oo says:
Akk Silk says:
ဝါဝါ ခိုင် says:
Soe Thawtar says:
Khin Than Aye says:
ဖိုး လွင် says:
ထက်ကောင်း ကင် says:
PaulTluang ZaUk says:
pathian in thlasuah lo pe hram seh
God bless you bro and sis
ချစ် ချစ် says:
Khin Myo Thet says:
ထာဝရ ချစ်သူ says:
Yin Yin Cho says:
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ လို့
Kyaw Soe Moe Kyaw says:
KyawThat Oo says:
Ko Sanay says:
Sophia Lay says:
Tun Tun Tun Tun says:
More Kyaw says:
Naw Cho Naw says:
Swe Swe Maw says:
Kaung Lay Lay says:
နှင်း စပယ် says:
မမ လေး says:
ဂဂါင်္ ဂဂါင်္ says:
Lamin Momo says:
Sayama Ruby Cung Nai says:
Lungawi um nasa.
Pathian in thlasuah an lo pek sin seh.
Sayama Ruby CungNai Lan says:
ပန်း စပယ် says:
ဆက် ဆက် says:
ဒေါ်စပယ် ဖြူ says:
Chit San Phyo says:
ဇီး ကွက် says: